manoloana ny fahitana ireo mponin’ity kaominina ambanivohitra ity izay lasa mitombo isa rehefa alohan’ny amin’ny 12 ora atoandro. Manararaotra iny fotoana iny ireo olona, hoy izy, moa koa eo ny fivoaran’ny vaovao izay ahitana fa efa misy ireo mararin’ilay valan’aretina no sitrana. Lasa tsy matahotra ilay valan’aretina ny olona. Mizotra makany amin’ny miabo ny filazam-baovao dia lasa miheritreritra isika fa efa miverina amin’ny laoniny ny fiainana kanefa mbola tokony hanaja ny fepetra apetraky ny fitondrana foibe, hoy hatrany ity ben’ny tanana ity. Sahirana koa moa ny olona dia mety izay no anton’ilay anomezana azy an’iny tapany maraina iny saingy izahay dia manana adidy amin’ny fampanarahana ny toromarika ka rehefa tonga ny lera dia tanterahana. Omaly izao (TTF: Ny alakamisy teo) dia nomena arovava daholo ireo mpivarotra rehetra sy ny olona satria hoe efa mahazo mivoaka ihany. Raha ohatra mantsy ka mahazo mivoaka kanefa tsy misy fepetra raisin’ny fanjakana dia hitako hoe mifanohitra ihany, hoy izy. Tsy navelanay nisitraka tsena mora koa, ohatra, izay tsy nanao arovava. Eo koa ny fampanajana ny elanelana 1 metatra eo amin’ireo mpivarotra ary manomboka eto dia hiha enjana izahay amin’ny fampanarahana ny fepetra rehetra, hoy hatrany izy.